Colombia oo Bilaa Falcao Ahi Halkee Bay Koobka Aduunka Ka Gaadhi Kartaa
Laacibka xulka qaranka Colombia Falcao ayaa wali la ildaran dhaawac la rajaynayo inuu ka reebo tartanka ugu xiisaha badan caalamka ee Koobka aduunka oo ay labaatan cisho iyo wax ka yari inaga xigaan bilowgiisa.
Weeraryahankan 28 jirka ah , ayaa xulkiisa u dhaliyey 9 gool, 13 kulan oo uu u saftay , waxaanu u suurto galliyey in qarankiisu kaalinta labaad kaga soo baxo qaarada Latin America, halka kaalinta koowaad uu ka hayay xulka Argentina, laakiin waxay isha jilibku wareegtay isagoo u safanaya naadiga Monaco ee horyaalka Faransiiska Bishii January.
Iyadoo aynu qarka u saaranahay bilowgii koobka aduunka, taageerayaasha iyo tababare Jose Pekerman, labaduba waxay u dhutinayaan oo tabayaan weeraryahankooda awooda badan ee ay ku naanaysaan ‘Tiger’ ama ‘Shabeelka’.
Si kastaba ha ahaatee, inagoon ilaabayn inay jiraan rag badan oo lagu bedeli karo, oo aynu ka xusi karno xidigaha ay kamidka yihiin :-
– Carlos Bacca oo wacdaro ka dhigay La Ligaha Spain, Europa Leaguna u qaaday Sevilla.
– Jackson Martínez, oo kamid ah raga ugu goolasha badan xidigaha Colombia ee ka ciyaara horyaaladada Yurub , waxaanu ahaa ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa kooxda Porto ee horyaalka Portaqiiska ee a Sagres.
Iyo rag badan oo kale oo dhamaantood ah weeraryahano hallis ah , kana soo dhalaalay horyaalada ay ka ciyaaraan, dhamaantoodna afka hore ballo ku qaba, muhiimna u noqon kara xulka Colombia ee Koobka aduunka ka qayb gallaya.
Dhabtuse waxay tahay, in dhamaan xidigahaasi midna aanu kala mid ahayn Falcao qaab ciyaareedka iyo shaqsiyan sida loo aaminsan yahayba, marka xaal sidaas yahay.
Saw isma weydiin karno , Xulka Colombia haddii uu waayo Falcao oo uu mudadaas kooban warkiisu shaaca ka cadaan waayo, halkeey gaadhi karayaan …?
Ozil, Schweinstiger, Kroos, Neuer iyo Muller Oo Hoggaaminaya Xulka Germany Ee Bishan La Ciyaari Doona England
Mark Hughes:“Chelsea Afartaba Way Qaadi Karta”
Yaya Toure oo laga reebay liiska ciyaaryahanada City u safanaya Champions League
PSG Oo Guul Ku Bilowday Horyaalka Ligue 1